Xogta takhalusid ka qalabka macruufka ma ahan sida ugu fudud ee la tirtiro wax ka qalab Android. Waxaa jira tallaabooyin gaar ah oo ay tahay in la raaco. Ayaa inta badan la isticmaalo software in ay tirtirto, soo celinta, iyo abaabulo content in qalabka macruufka waa software Lugood. Bal aan eegno talaabooyinka in ay tirtirto xogta ka iPod Nano, shaandheeyn lagu iPod, iyo iPod taabto.
Qaybta 1. Sida loo kala cadeeyo xogta ka Nano iPod ah
Doorashada ugu fiican ee suurto gal ah in ay nadiifiso xogta ka iPod Nano yahay si aad u nadiifiso qalabka ay u xirmaya Lugood aad kombuutarka. Tallaabada ugu horreysa waa in ay soo bixi nooca ugu dambeeya ee Lugood aad kombuutarka. Markaas, xiriiriyaan iPod Nano in PC la cable USB. Marka qalab aad la ogaado, Lugood tusi doonaa iPod maamulka shaashadda. Markaas, dooro "Soo Celinta iPod" doorasho.
Pop-up ka soo muuqan doono si loo xaqiijiyo haddii aad rabto in la soo celiyo qalabka ama aan. Just guji soo celiyo. Markaas, mid kale oo pop-up ka soo muuqan doono oo aad ku dhaliyay lahaa si aad u cusboonaysiiso software ah in nooca ugu dambeeya, ee xaalad haddii ay sidaas ma aha.
Riix heshiin iyo cusboonaysiiso software qalab ee. Nidaamka ayaa sidoo kale dhaliyay doonaa inaad geli Lugood user id iyo password.
Later, Lugood aad ayaana laga soo celin doonaa heeso jir ah iyo sawiro. Just uncheck sanduuqa oo guji "sameeyey ma jirto". Daqiiqado yar gudahood, Lugood tirtiri lahaa xogta oo dhan ka iPod Nano, oo sida ugu fiican ee cusub uu noqon doono.
Qaybta 2. Sida loo kala cadeeyo heeso ka iPod shaandheyn
Heeso takhalusid ka iPod taabto waa fududdahay badan songs tirka ka iPod classic, shaandheeyn ama iPod Nano. In-si ay u tirtirto heeso ka shaandheeyn lagu iPod, waxa ay ku xirmaan aad PC in uu leeyahay Lugood rakibay it on. Lugood aqoonsan lahaa qalab aad dhowr ilbiriqsi. Markaas, fur fayl ka walaacsan, oo mid baa mid ku tirtirto songs la rabin ama iyaga oo dhan tirtirto mar.
Qaybta 3. Sida loo kala cadeeyo xogta ka Classic iPod ah
Mar kale, ikhtiyaarka ugu fiican in ay nadiifiso xogta ka classic iPod waa ay fudud xira qalab aad la Lugood on your computer. Aad classic iPod Marka aad ku xirmaan aad PC, Lugood lagu ogaan lahaa qalab aad dhowr ilbiriqsi. Riix magaca qalabka, ka dibna, guji kooban. Ka dib markii in, guji "Soo Celinta." Geedi socodka dib u soo celinta bilaabi doonaa gudaha dhawr sekan, iyo dhammaan macluumaadka ku saabsan qalabka laga tirtirayaa lahaa.
Qaybta 4. Sida loo kala cadeeyo taariikhda ku iPod taabashada
Iyadoo iibinta ama isweydaarsiga jir telefoonada smart iyo kiniiniyada si ay kuwo cusub, la tirtiro xogta ka qalab jir ah waxaa loo arkaa hawsha ugu muhiimsan. Waxaa jira barnaamijyo software lagu kalsoonaan karo in aad u yar in tirtiri kartaa xogta ka iPod, iPad, iPhone iyo qalabka kale ee macruufka. Wondershare SafeEraser waa ikhtiyaarka ugu fiican oo kaa caawin kara in aad looga hortago tuugada aqoonsiga ka dib markii iibinta aad PC kiniin jir ama telefoonka smart. Sidii hore loo soo xusay, software si joogta tirtirtaa xogta ka qalabka macruufka oo dhan oo ka dhigaysa wax aan macquul ahayn inuu ka soo kabsado wax dambe. Waxa la kulmay dhowr heerarka tirtirka xog joogto ah oo ay ku jiraan mil Creech DoD 5220 - 22 M. From photos, xogta gaarka ah, la tirtiro xogta, si files qaabab kala duwan, SafeEraser ammaan tirtirtaa wax walba oo ka soo qalab aad.
SafeEraser nadiifin kartaa adiga iPod iyo sii daayo meel lagu kaydiyo ilbiriqsi gudahood
SafeEraser laga yaabaa inay tahay habka ugu fudud ee ay u soo saarto barnaamijyadooda la rabin, files tirtiro oo nadiif ah, si ay u masixi xogta gaarka ah, oo ku cadaadisaa sawiro.
Codsiga SafeEraser ee aad kombuutarka rakib.
Fur codsiga. Connect aad iPod xiriiri si aad u computer la cable USB. The software SafeEraser ogaan lahayd iPod taabashada (ama qalab kale oo macruufka kasta).
Haddii aad hubto oo ku saabsan waxa aad rabtid in aad tirtirto, oo aad si toos ah u dooran kartaa nooca xogta ka fursadaha siiyey uu furmo suuqa hoose. Duldhig dulqabo badan icon kasta, ka dibna waxa uu ku tusi doonaa nooca xogta.
Haddii aad dooneyso in aad tirtirto oo dhan xogta ka qalab aad, waa in aad dooro "1-Click doorasho Nadiifinta."
SafeEraser tirtirtaa oo dhan files aan loo baahnayn oo ka dhigaysa meel in qalabka our oo kaliya dhowr ilbiriqsi gudahood. Marka aad tirtirto xogta la isticmaalayo ikhtiyaarka express nadiifinta, ma jirto hab inuu ka soo kabsado xogta in. Sidaas, waxaa lagu talinayaa in aad dib-up for isku mid.
Xusuusnow, nadiifinta xogta laga aad telefoon ama kiniin ah waa mid aad u muhiim ah. Haddii aad bixisay fiidda oo xogta aad ka tago gudahood qalab aad iyadoo iibinta, qof laga yaabo in ay soo kabsadaan iyo si xun u adeegsi.
> Resource > Clean-up > Sida loo kala cadeeyo xogta ka iPod ah